သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယား အတွက် share ခြင်းဖြင့် စည်းလုံးညီညွှတ်စွာအင်အားပြကြစို့ ပိုက်ဆံရှိရင် အာဏာက အလိုလိုရှိလာသတဲ့လား ပိုက်ဆံတစ်ခုတည်းနဲ့ အမှန်တရားတွေကို ပါးစပ်ပေါက်ပိတ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ခေတ်ရောက်နေပြီလား 💔 ပိုက်ဆံသည်သာ ဒုတိယဘုရားသခင်ဆိုသည်မှာ ဧကန်ပင်လား 💔 အ​ဖေကဒုရဲအုပ်​ အ​မေက​ကျောင်းအုပ်​လုပ်​တဲ့လူကကိုကိုလို့​က​လေးကိုယ်​တိုင်​​ပြောတယ်​…. အမှု့ကြာတာရယ်​ ​တော်​​တော်​နဲ့မ​​ပေါ်တာရယ်​ကဘာ​ကြောင့်​လဲ…. ခန့်​မှန်းမိမယ်​ထင်ပါ​တယ်​….ဝမ်းကွဲညီမကိုလဲကျူးလွန်​ဖူးတယ်​လို့စကား​တွေရှိဖူးတယ်​တဲ့…. မိဘ​တွေရဲ့ cover ​ကောင်းလို့​အေး​ဆေးပီးသွားတယ်​လို့​ကြားတာပဲ….. […]
၂၀၁၉ ဇူလိုင်လအတွက် ..ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ
၂၀၁၉ ဇူလိုင်လအတွက် ..ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ လာ မယ့် ဇူလိုင်လအတွင်းမှာ အာကာသအတွင်း ဖြစ်ပေါ်မယ့် ထူးခြားဖြစ်စဉ်အချို့ကို အာကာသနှင့်စကြဝဠာ ရဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအတွက် ရေးသားတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအချက်ကတော့ နယုန်လကွယ်နေ့မှာ နေ အပြည့်ကြတ်ခြင်း နဲ့ ဝါဆိုလပြည့်ညမှ လ တပိုင်းကြတ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နေကြတ်ခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံမှ မမြင်တွေ့ရပေမယ့် […]
စင်ကာပူက ..တကယ့်အဟုတ်ကြီးကို …အခမဲ့ပေးတဲ့ယာယီပျံကျဈေး
စင်ကာပူက ..တကယ့်အဟုတ်ကြီးကို …အခမဲ့ပေးတဲ့ယာယီပျံကျဈေး စင် ကာ ပူ မှာ အဲဒီလို အခမဲ့ပေးနေတဲ့ ယာယီပျံကျဈေးလေးတစ်ခု ရှိနေတယ်ဆိုတာ မိတ်ဆွေတို့သိကြပါသလား။ တချို့တွေကလည်း သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲ ဒီဈေး မှာ ခင်းကျင်းပြသမယ့် ကုန်ပစ္စည်းမှန်သမျှဟာ အခမဲ့ပါ။ မည်သူမဆို သွားရောက်နိုင်ပြီး ကြိုက်တာယူငင်လို့ရပါတယ်။ ဦးရာလူစနစ်ပါ။ လိုအပ်တာပဲယူပြီး […]
ထိုင်းရောက် ရွှေမြန်မာတွေ.. သတိထားရမယ့် …ထိုင်းရဲတွေရဲ့ ဂွင်ဆင်ပုံ ဆင်နည်းများ
ထိုင်းရောက် ရွှေမြန်မာတွေ.. သတိထားရမယ့် …ထိုင်းရဲတွေရဲ့ ဂွင်ဆင်ပုံ ဆင်နည်းများ အခုလို လကုန်ခါနီး လခထုတ်ရက်နား နီးလာရင် ဆူကွန်ဗစ် ၂၃ လမ်းဝန်းကျင် ဆွိုင် အာဆော့ မွန်ထရီ လမ်းဆုံနားမှာ ထိုင်းရဲတွေ သောင်းကျန်းပြီ။ တာမီနယ် ၂၁ Terminal 21 ကုန်တိုက် ဝန်းကျင်၊ […]
ငါးရက်တာ အစာနဲ့ ရေ မရ.. ပိတ်လှောင်ထားသည့်.. မြန်မာ နိုင်ငံသား (၂၀) အား ..ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ကယ်တင်ပေးခဲ့
ငါးရက်တာ အစာနဲ့ ရေ မရ.. ပိတ်လှောင်ထားသည့်.. မြန်မာ နိုင်ငံသား (၂၀) အား ..ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ကယ်တင်ပေးခဲ့ ထိုင်းမလေးနယ်စပ် စုတ်ခလာ ခရိုင် စဒေါင်မြိုနယ် ပါဒန်ဘေဆာ ရပ်ကွက် က လူမနေ စွန့် ပစ် ဂိုထောင် တစ်လုံးအတွင်းမှာ (၅) ရက်တာ […]
ပြည့်သူ့အသံနားထောင်ပြီး ..သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယား ..အမှုအတွက် သမ္မတရုံးမှထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ
ပြည့်သူ့အသံနားထောင်ပြီး ..သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယား ..အမှုအတွက် သမ္မတရုံးမှထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ Myanmar President Office နဲ့ Myanmar State Counsellor Office တို့ရဲ့ Message Box နဲ့ Comment များမှာ ပေးပို့လာတဲ့ တောင်းဆိုချက်များစွာကို ကောင်းစွာ လက်ခံရရှိပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားတာကို […]
ရောဂါကြောင့် ချစ်သူနဲ့ မသေမီတစ်ရက်အလိုမှာ လက်ထပ်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ အမျိုးသား …
ရောဂါကြောင့် ချစ်သူနဲ့ မသေမီတစ်ရက်အလိုမှာ လက်ထပ်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ အမျိုးသား … ရက်ဘီအားကစားသမားတစ်ဦးကတော့ ဦးနှောက်အကြိတ်ကင်ဆာကြောင့် မကြာသေးခင်ကပဲ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ မသေမီတစ်ရက်အလိုမှာ ကျန်းမာစဉ်က တောင့်တခဲ့တဲ့ ချစ်သူနဲ့ ရွှေလက်ဆက်နိုင်ရေးအိပ်မက်ကလေးကတော့ ပြည့်ဝသွားရှာပါတယ် …။ မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟတွေကတော့ အပျော်ဆိုတာထက်၊ ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုတွေ ပိုပေးနေတဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးမို့ မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ပါဘဲ။ […]